I-Fortnite ye-Android ngoku iyafumaneka ngaphandle kwesimemo | I-Androidsis
I-Fortnite ngokungathandabuzekiyo yenye yezona midlalo zidumileyo zonyaka. Nangona ukufika kwayo kwi-Android khange kube yeyona ilula. Ekuqaleni, yayifumaneka kuphela kwiqela elincinci leefowuni. Ukongeza, ukuze ukhuphele umdlalo kwi-Epic Games, kuye kwafuneka ukuba ube nesimemo. Ngethamsanqa, oku sele kutshintshile.
Ukusukela ngoku akukho sidingo sokufumana isimemo sokudlala iFortnite. Ke, ukubakho ngoku kuvulelekile kubasebenzisi abanomdla wokufikelela kumdlalo. Nangona kusekho uthotho lweemfuno ekufuneka zifezekisiwe ukuze uyidlale.
Imidlalo ye-Epic ityhile uluhlu lweefowuni ekuqaleni ezihambelana neFortnite. Oku kuthetha ukuba abo basebenzisi banazo naziphi na ezi modeli abayi kuba nangxaki yokukhuphela umdlalo kwifowuni yabo. Baza kuba nakho ukufikelela kwi-APK yayo ngaphandle kwengxaki. Uluhlu lulandelayo:
I-Samsung Galaxy S7 / S7 Edge, S8 / S8 +, S9 / S9 +, Qaphela i-8, Qaphela i-9, i-Tab S3 kunye ne-Tab S4
Ifowuni ye-Asus ROG, iZenfone 4 Pro, 5Z kunye neV
I-Google Pixel / Pixel XL kunye nePixel 2 / Pixel 2 XL
IHTC 10, U Ultra, U11 / U11 +, U12 +
IHuawei Honor 10, Honor Play, Mate 10 / Pro, Mate RS, Nova 3, P20 / Pro kunye neV10
LG G5, G6, G7 ThinQ, V20 kunye neV30 / V30 +
I-OnePlus 5 / 5T kunye ne-6
I-Sony Xperia XZ / iPremiyamu, ii-Xzs, i-XZ1 / i-compact, i-XZ2 / iPremiyamu / i-Compact, i-XZ3
Xiaomi Blackshark, Mi 5 / 5S / 5S Plus, 6/6 Plus, Mi 8/8 Explorer / 8SE, Mi Mix, Mi Mix 2, Mi Mix 2S kunye neMi Qaphela 2
I-ZTE Axon 7 / 7s, Axon M, Nubia / Z17 / Z17s kunye neNubia Z11
Nangona kucingelwa ukuba kukho iifowuni ezingekho kolu luhlu ezinokukhuphela i-APK. Nangona kufuneka babe nohlobo lwe-Android olingana okanye oluphezulu kune-Android 8.0 Oreo, ubuncinci i-3 GB ye-RAM kwaye i-GPU yabo yiAdreno 530 okanye ngaphezulu, iMali-G71 MP20, iMali-G72 MP12 okanye ngaphezulu. Ukuba ezi mfuno zifezekisiwe, baya kuba nakho ukukhuphela i-Fortnite.
Njengoko sele uyazi, I-APK ye-Fortnite ayifumaneki kwiVenkile yokudlala. Kulabo banomdla kumdlalo, kufuneka baye kwiwebhusayithi yeMidlalo ye-Epic kuwo. Unga fikelela kule khonkco.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Imidlalo ye-Android » Ngoku kunokwenzeka ukukhuphela i-Fortnite ngaphandle kwesimemo